Lioka 11 - Ny Baiboly
Lioka toko 11
Ny nampianaran'i Jesoa-Kristy ny mpianany hivavaka - Ilay demony moana - Ny taranaka ratsy - Ny faharatsian'ny Farisiana.
1Indray andro nivavaka tao amin'ny fitoerana anankiray Jesoa, ka nony nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: Mba ampianaro hivavaka izahay, Tompoko, tahaka ny nampianaran'i Joany ny mpianany. 2Ary hoy izy taminy: Raha mivavaka hianareo, manaova hoe: Ray ô, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. 3Omeo anay anio ny hanina ilainay isan'andro. 4Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza avelanao ho resin'ny fitaoman-dratsy izahay.
5Dia hoy indray izy taminy: Raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasaka alina ka manao aminy hoe: Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, 6fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko, nefa tsy manan-katolotra azy aho, 7ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe: Aza manahirana ahy, fa ny varavarana efa mihidy; izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka hifoha hanome anao aho. 8Lazaiko aminareo, fa raha maharitra mandondòna izy, na dia tsy hifoha hanome azy noho ny fisakaizany aza ilay ao an-trano, dia hifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy. 9Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita; mandondòna, dia hovohana. 10Fa izay rehetra mangataka no mahazo; izay mitady no mahita, ary izay mandondòna no vohana. 11Iza aminareo no ray hanome vato ny zanany, raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy, raha hazandrano no angatahiny, 12na hanome maingoka azy raha atody no angatahiny? 13Koa raha hianareo, na dia ratsy toy inona aza, mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?
14Ary nandroaka demony Jesoa, ka moana izany demony izany. Nony voaroaka ny demony, dia niteny ilay moana, ka gaga ny vahoaka; 15fa ny sasany tamin'izay teo nanao hoe: Belzeboba lehiben'ny demony no androahany ny demony; 16ary ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana avy an-danitra taminy. 17Fa Jesoa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe: Rava izay fanjakana miady an-trano; mianjera mifanongoa ny trano; 18ka raha miady an-trano àry Satana, ahoana no haharetan'ny fanjakany? satria lazainareo fa Belzeboba no androahako ny demony. 19Ary raha amin'ny herin'i Belzeboba àry no androahako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androahan'ny zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo. 20Fa raha ny rantsan-tànan'Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra.
24Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin'ny tanety maina izy, ka nony tsy mahita dia manao hoe: Hody any an-tranoko izay nivoahako aho. 25Ary nony tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka, 26ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra eo. Ary ny faran'izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany.
27Raha nilaza izany izy, dia nisy vehivavy anankiray niantso teo afovoan'ny vahoaka ka nanao taminy hoe: Sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay ninonoanao! 28Fa vao mainka sambatra aza, hoy Jesoa, izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy.
29Ary nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazany hoe: Taranaka ratsy ity taranaka izy; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa mpaminany. 30Fa tahaka ny naha-famantarana an'i Jonasa tamin'ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. 31Hiara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria niala avy tany amin'ny fara vazan-tany izy hihaino ny fahendren'i Salomona, nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. 32Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka tamin'ny toritenin'i Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho Jonasa eto.
33Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-katakonana na ao ambanin'ny vata famarana, fa eo amin'ny fanaovan-jiro izy no apetrany mba hahitan'izay miditra ny mazava. 34Ny maso no jiron'ny tenanao, ka raha tsara ny masonao dia hazava ny tenanao rehetra; fa raha ratsy kosa izy, dia ho maizina koa ny tenanao. 35Tandremo àry fandrao zary aizina ny fahazavana ao anatinao. 36Fa raha ao amin'ny mazava tsy mifangaro aizina ny tenanao manontolo, dia hazava izy rehetra, mova tsy ny hazavain'ny jiro tsara firehitra hianao.
37Raha mbola niteny izy, dia nisy Farisiana anankiray nanasa azy hisakafo ao aminy, ka niditra izy dia nipetraka nihinana. 38Fa velona eritreritra ilay Farisiana nahita ity izy tsy nisasa alohan'ny fihinana, 39ka hoy ny Tompo taminy: Hianareo Farisiana kosa iky mandio ny vohon'ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana. 40Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy nanao ny atiny koa? 41Izao ihany e: manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra.
42Fa loza ho anareo, ry Farisiana, satria ny fahafolon'ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra aloanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory; nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa. 43Loza ho anareo, ry Farisiana, fa tia ny toerana voalohany ao amin'ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja hianareo. 44Loza ho anareo, fa toy ny fasana tsy hita hianareo, ka hitsahin'ny olona fa tsy fantany.
45Dia niteny ny mpampiana-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, raha izany no ataonao, dia manala baraka anay koa hianao. 46Fa hoy Jesoa: Loza ho anareo koa, ry mpampianatra ny Lalàna, fa mampitondra entan-tsy zaka ny olona hianareo, nefa na dia ny rantsan-tànanareo iray aza tsy akasikareo an'izany akory. 47Loza ho anareo, fa manao fasana ho an'ny mpaminany hianareo, kanefa ny razanareo ihany no namono azy! 48Koa mitsangan-ko vavolombelona sy mpankasitraka ny nataon'ny razanareo hianareo, fa izy moa namono ny mpaminany, hianareo kosa manao fasana ho azy. 49Izany no nanaovan'ny Fahendren'Andriamanitra hoe: Haniraka mpaminany sy apostoly ho any aminy aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany hoenjehiny. 50mba hampamoahina an'ity taranaka ity avokoa ny ràn'ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nahariana an'izao tontolo izao, 51dia hatramin'ny ràn'i Abela ka hatramin'ny ràn'i Zakaria izay novonoina tanelanelan'ny otely sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahina an'izany tokoa ity taranaka ity. 52Loza ho anareo ry mpampianatra ny Lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalana, ka hianareo tsy niditra, ny te-hiditra nosakananareo.
53Raha mbola niteny izany izy, dia nododonan'ny Farisiana sy ny mpanora-dalàna, ary nozezehany fanontaniana maro, 54mba hamandrihany azy sy hahazoany vava latsaka hiampangana azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0454 seconds